Okpomọkụ akara static ± 1 Celsius C, ike ± 3 Celsius C.
Preheater na-anabata usoro njigide iji mee ka njikwa ọkwa mmiri kwụsie ike na nri ziri ezi (patent: ZL201420137471.2).
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nwere obere ume ike yana mmetụta preheating dị mma.
1) Ihe a na-eme nke efere nchara pụrụ iche anaghị emetọ mmiri mmiri magnesium, nwere usoro mgbochi corrosion n'ime, ma nwee ogologo ndụ ọrụ.
2) 1.2888 ihe na-emepụta ihe eji eme ihe na ihe ndị ọzọ, ndụ ogologo ndụ.
3) N'iji tube na-egbuke egbuke ma ọ bụ usoro ikpo ọkụ ọzọ, enwere ike dochie ọkụ ọkụ ngwa ngwa.
4) igwe anaghị agba nchara na panel, corrosion eguzogide, elu okpomọkụ na-eguzogide.
5) Thermocouple na-ebubata, njikwa okpomọkụ ziri ezi na ndụ ọrụ dị elu.
Kedu ihe kpatara m ga-eji họrọ YOMATO Die Casting Machines?
Ọ dị mfe. Anyị na-enye gị igwe nkedo anwụ a pụrụ ịdabere na ya na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. E nwekwara ụdị ndị ọzọ dị elu dị n'ebe ahụ, mana ha ga-eme ka ị kwụọ ụgwọ karịa. Enwekwara ụfọdụ igwe dị ọnụ ala karịa, mana ha anaghị enye ogo ịchọrọ maka nkedo ọnwụ siri ike.
Kedu ihe bụ isi uru gị?
Yomato nyere dị ka Top 5 ika na China, 25 + afọ ọgaranya ahụmahụ na R&D na n'ichepụta, factory PC: 700sets / afọ na elu àgwà ọkọlọtọ, 7x24 kasị mma nzaghachi ahịa & ọrụ n'ụwa nile.
Anyị bụ ndị ọkachamara na-emepụta igwe nkedo anwụ anwụ kemgbe 2008, Ecoturst dị ka onye na-ebupụ naanị otu Yomato.
Ị nwere ike hazie igwe nkedo anwụ anwụ ka ọ bụrụ ihe m chọrọ?
Kpamkpam. Onye ọ bụla nkedo anwụ na-agbaso usoro pụrụ iche ma nwee ihe ndị a chọrọ. Ọ bụrụ na ị na-agwa anyị banyere gị chọrọ, anyị ga-emegharị ya na ahaziri mmepụta.
Igwe ihe nkedo YOMATO nwụrụ anwụ dabara adaba maka imepụta akụkụ ndị na-achọsi ike. Dị ka ndị ngalaba ụgbọ ala chọrọ?
Obi abụọ adịghị ya. Ọtụtụ ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ OEM na ODM (Benz, BMW, VW,Geely, wdg). A na-anwale igwe anyị n'ụzọ zuru ezu ruo ọtụtụ afọ ma nwee ike ịmepụta akụkụ dị mma maka ndị ahịa na-achọsi ike na ụlọ ọrụ ọ bụla.
Nke gara aga: Gas Magnesium Furnace Q Series
Osote: Akwụkwọ ntuziaka Magnesium Furnace C Series
Eletriki Magnesium Furnace H Series nkọwapụta ndepụta
Oke Nkeji DMH80 DMH125 DMH200 DMH315 DMH500
Ogo ọkụ mm 1200*650*1000 1450*850*1020 1600*900*1020 1650*900*1020 1650*900*1020
Enyere ikike Kg 200 300 300 500 500
Ọnụọgụ agbaze Kg/h 80 120 120 220 220
Ọdịdị nke nwere ike imebi . Ụlọ mgbaàmà
Ike 380-420V/50-60Hz/waya ise nke agba atọ
Enyere ike KW 30 45 45 75 75
Enyere ugbu a A 45 70 70 110 110
Okpomọkụ ọrụ ọkụ kachasị elu ℃ 850
Ọnọdụ ọrụ kachasị elu nke mmiri mmiri magnesium ℃ 710
Okpomọkụ ọkọnọ gas ℃ 350
Nchekwa gas eruba(max.)
N'ime oghere nke ihe onwunwe ite mm 55 65 70 80 85
DIN45635-01-K1.2 mkpọtụ dB(A) | 85
Ibu ibu ọkụ n'arọ 1200 1500 1600 2500 2500
Igwe ihe nkedo dabara adaba T 60-88 100-150 160-200 300-400 500-600
Anyị nwere ike ịnye ọtụtụ ụdị ọkụ magnesium alloy iji gboo mkpa mmepụta nke mmepụta ihe nkedo dị iche iche. Site na nnukwu ọkụ na-agbaze nke ọma ruo na ọkụ ọkụ na-agbaze dị mfe, na mgbakwunye ọkọlọtọ ọkọlọtọ, anyị na-enyekwa ọkụ omenala siri ike dị ka ihe ị chọrọ.
Igwe ọkụ na-ejide Magnesium Alloy
Igwe ọkụ na-agbaze Magnesium Alloy
Igwe ọkụ Magnesium
Igwe ọkụ na-ejide Magnesium
Igwe ọkụ na-agbaze Magnesium